ओली र प्रचण्ड प्रतिक्रान्तिको हौवा फैलाएर देश र पार्टीको नेतृत्व गर्न असफल भएका छन् : लेखराज भट्ट
पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको सन्दर्भ किन उठाउनुभयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तो भनाइका पछाडि केही कारण अनुमान गर्न सकिन्छ।
पहिलो, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण पनि कहीं न कहीं यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो दबाबबाट नेतृत्व ढल्मलाइरहेको छ, आतंकित भइरहेको छ। दोस्रो, आफूभित्र आत्मविश्वास निर्माण गर्ने र कार्यकर्ता र सहयोगीमाथि विश्वास गर्ने पक्षमा कमी भएको हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन देखिइरहेको छ। हिजो आफ्ना सहयोगी, कार्यकर्ता र जनतामा विश्वास स्थापित गरेर प्रतिगमन परास्त गर्ने नेतृत्व आज निकै ढल्मलाइरहेछ ? कहीं न कहीं थोरै नेतृत्वको जीवनस्तरमा परिवर्तन भएकाले हो कि ? आफ्नो जीवनशैलीमा खतरा मोल्न डराएको हो कि ? सुखसयलको जीवनमा कहींकतैबाट अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने डरले पो हो कि ?
शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन्। सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। त्यसकारण पनि केही असन्तुष्टि छन्। त्यो पक्षको असन्तुष्टिका कारण पनि नेतृत्वले अझै खतरा देखिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो अन्ततः जनता, कार्यकर्ता र सहयोगीप्रति विश्वास नहुनुको परिणाम हो।
केही अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको चलखेलका कारण पनि हुन सक्छन्। अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा भारत, चीनको सक्रिय चासोमा कुनै कमी छैन। अझ नेपालबारे युरोपेली र अमेरिकीहरूको समेत चासो बढेर आएको छ।
चीनले अझै पनि नेपाललाई भारतीय प्रभुत्वमै छोडेको जस्तो देखिन्छ। ‘रेशममार्ग’ भन्ने किताब पढ्ढा पनि त्यही संकेत मिल्छ। रेशममार्गमा बर्मा, भारतलगायत ६४ मुलुकको नक्सांकन छ। नेपाल चीनसँगै जोडिएको छ तर पर्दैन। त्यसले भारतीय प्रभुत्वमै नेपाललाई छोडेजस्तो देखिन्छ। भारतको नेपालप्रतिको धारणा हेर्ने हो भने त्यसमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन।
हुन त पार्टी नेताहरूले स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा बाह्य सम्बन्ध अनुकूल बनेको उल्लेख छ। डकुमेन्टमा अनुकूल बने पनि व्यवहारमा अनुकूल छ, छैन हेर्नुपर्छ।
नेतृत्वले राजनीतिमा सधैं विकल्प दिन सक्नुपर्छ। खतरा औंल्याउने मात्र होइन, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने योजना नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ। परबाट आउने खतरा देख्दादेख्दै त्यसको सामना कसरी गर्ने भनिएन भने त्यो खतरा रहिरहन्छ। हिजो जनतालाई संगठित गरौं, आफू पनि संगठित बनौं भनेर आह्वान गर्ने नेतृत्वले अहिले विकल्प दिन सकिरहेको छैन। अर्काेतिर नेतृत्वको नैतिकता पनि माथि उठेको पनि देखिँदैन। जनताका अपेक्षा धेरै छन्। त्यसअनुसार पार्टी र सरकार अगाडि जान सकेको छैन।
जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि अब राजतन्त्र कसैले फर्काउन सोचेको छ भने त्यसको सम्भावना छैन। तर संघीयताका विषयमा भने जनतामा अविश्वास पैदा गराएर त्यसभित्र चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न। जनतालाई तल्लो तहसम्म सेवा दिन सकेनौं भने संघीयताको जति कुरा गरे पनि जनतामा हिजो जे थियो, त्यही ठीक छ भन्ने भावना आउन सक्छ। त्यस्तो बेला संघीयतामा जनताको अविश्वास पैदा हुन सक्छ।
त्यही विन्दुबाट प्रतिगामी शक्तिले चलखेल बढाउन सक्छ। त्यसतर्फ भने सबै चनाखो बनिरहनु आवश्यक देखिन्छ।